Translations < Myanmar (Burmese) < 4.2.x < GlotPress | WordPress.org
Translation of 4.2.x: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (1,623) • Translated (1,619) • Untranslated (4) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
2017-12-17 04:38:46 UTC
2017-12-17 04:38:47 UTC
2017-12-17 04:39:05 UTC
Unsupported value type (%s). လက်မခံသော တန်ဖိုး အမျိုးအစား (%s)	 Details
လက်မခံသော တန်ဖိုး အမျိုးအစား (%s)
2017-12-12 05:33:42 UTC
2017-12-12 06:09:10 UTC
The site you were looking for, <strong>%s</strong>, does not exist. သင်ရှာနေသော <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိပါ။ Details
သင်ရှာနေသော <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိပါ။
2017-12-12 06:09:11 UTC
The site you were looking for, <strong>%s</strong>, does not exist, but you can create it now! သင်ရှာနေသော <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိပါ။ အသစ်ပြုလုပ်လိုလျှင် ယခုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။	 Details
သင်ရှာနေသော <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိပါ။ အသစ်ပြုလုပ်လိုလျှင် ယခုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
You are logged in already. No need to register again! သင်ဝင်ရောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပါ !	 Details
သင်ဝင်ရောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်ပါ !
2015-06-28 13:52:23 UTC
Sorry, new registrations are not allowed at this time. စိတ်မကောင်းပါ။ မှတ်ပုံတင် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းကို ယခုအချိန်တွင် ခွင့်ပြုမထားပါ။	 Details
စိတ်မကောင်းပါ။ မှတ်ပုံတင် အသစ်ပြုလုပ်ခြင်းကို ယခုအချိန်တွင် ခွင့်ပြုမထားပါ။
2015-06-28 13:52:20 UTC
Site registration has been disabled. ဆိုဒ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်။	 Details
ဆိုဒ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်။
2015-06-28 13:52:27 UTC
User registration has been disabled. သုံးသူ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်။	 Details
သုံးသူ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်။
2015-06-28 13:52:41 UTC
You must first <a href="%s">log in</a>, and then you can createanew site. ပထမဆုံး <a href="%s">ဝင်ရောက်</a>ထားရပါမည်။ ပြီးလျှင် ဆိုဒ်အသစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။	 Details
ပထမဆုံး <a href="%s">ဝင်ရောက်</a>ထားရပါမည်။ ပြီးလျှင် ဆိုဒ်အသစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
Registration has been disabled. မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်။	 Details